Torolalana mpivoaka isan-kerinandro mikasika ny asa fanoratana : manolo-kevitra momba ny tantara · Global Voices teny Malagasy
Araho ny torohevitr'i Rezwan momba ny asa fanoratana!
Voadika ny 12 Novambra 2019 14:43 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2015)
Fitambaran'ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny asa soratra sy ny fitaterana ato amin'ny Global Voices ny Torolalana Mpivoaka Isan-kerinandro mikasika ny Asa Fanoratana. I Rezwan, toniandahatsoratry ny faritra Azia Atsimo, no hitondra ho anao ireo torohevitra amin'ity volana Septambra ity.
Mety ho sarotra ny manoratra lahatsoratra ato amin'ny GV. Haiko fa na ho an'ireo mpandray anjara matetika, izay maro, aza, indraindray dia mety ho sarotra ny mitady lohahevitra horesahina. Mety efa namaky lahatsoratra feno vitsivitsy mikasika lohahevitranà vaovao mafana iray ry zareo ary tsy fantany ny lanja hoentin'ny asa sorany (izany hoe, efa nisy olon-kafa nanao izany ka nahoana no tokony mbola hanao izany aho?) na koa mety tratran'ny krizin'ny fitohanan'ny mpanoratra izy ireo.
Raha toa ka manam-potoana ianao fa tsy dia azonao antoka loatra hoe inona no horesahinao, manampy foana ny mieritreritra ny sokajy mahaliana anao ao anatin'ny zavatra tianao hosoratana. Mety mifantoka aminà lohahevitra na fanontaniana iray mandritra ny fotoana maharitra ianao, kanefa manana fahaizana na traikefa aminà olana hafa; noho izany, angamba afaka manandrana fiovàna ianao.
Afaka manomboka amin'izay lohahevitra hainy indrindra ireo mpanoratra vaovao. Ny fanaovany izany dia hahafahany mahazo aina tsara eo am-panoratana momba ny zavatra ananany fahalalàna lalina.
Misy karazanà fomba maro ahafahanao mahita hevitra ho ana lahatsoratra am-bilaogy.
Raha toa ka lohahevitra mahaliana amin'ny ankapobeny ianao, ny zavatra azonao atao voalohany dia ny mikaroka izany ao amin'ny Google mba hahafantarana bebe kokoa. Afaka manampy antsika amin'ny fisafidianana ny fomba fijery na izay teboka ifantohantsika ny fahfantarana izay zavatra voasoratra teo aloha, indrindra satria ato amin'ny GV isika dia te hanasongadina araka izay vitantsika ireo olana tsy dia voaresaka firy, olana izay tsy resahin'ireo haino amanjery nentimpaharazana.
Na koa, afaka manaraka ireo olona mpamolavola sangany ao amin'ny tambajotra sosialinà faritra na firenena iray isika ary maka aingampanahy na hevitra amin'ny alalan'izany.
Amin'ny manaraka, rehefa mijery zavatra mahaliana anao anatin'ny Aterineto na ivelany ianao, halalino bebe kokoa izany. Mety hahita hevitra ho ana tantara iray ianao.
Matetika, handefa rohy natolony ho anao ireo namanao na mpanaraka anao. Aza tsinontsinoavina izy ireny — tsindriho ireo rohy naroso ao amin'ny faham-baovao Facebook na Twitter-nao. Mety hahita aingampanahy hanoratra momba ana lohahevitra iray ianao.
Vakivakio ireo tranonkalanà fanaovangazetin'olontsotra. Matetika aho mamakivaky ny Demotiv (http://www.demotix.com/) ary raha mahita sary iray na amin'andiany mahaliana ahy aho, mety hiteraka hevitra ho ana lahatsoratra izany (mety tsara koa izany satria afaka mampiasa ireo sary ireo ho an'ny GV isika!). Toy izany koa, mety ho loharanona aingam-panahy hanoratana lahatsoratra ireo tranonkalanà fanaovangazetin'olontsotra toy ny Video Volunteers (http://www.videovolunteers.org/).
Mizara mandray an-tsoratra. Afaka mampiasa ny keep.google.com ianao na ireo hafatra fampahatsiahivana ao amin'ny solosainao mba hanamarihana ireo hevitra sy rohy. Zava-dehibe izany, satria matetika isika mahita rohy na hevitra tsy hitantsika intsony rehefa avy eo. Afaka mampiasa ny fanitarana fitety, Pocket (https://getpocket.com/a/), ihany koa isika mba hiraketana ireo rohy.
Vao manana hevitra fotsiny ianao, ny dingana manaraka dia ny famantarana ny fomba hitondranao izany. Amin'ny andininy manaraka, hiresaka mikasika ny fakàna ireo loharanon-kevitry ny tambajotran'olontsotra sy ny fanalehibeazana ny fomba fijerintsika aho.
Mba lazao ahy raha toa ka manana fanontaniana ianao!